ပိုးစုန်ကြူးများသည် များစွာသော အခြားသက်ရှိများသကဲ့သို့ မြေယာအသုံးပြုမှုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှုများရှိနေသည် (ဥပမာ၊ ကျက်စားရာဧရိယာနှင့် ဆက်သွယ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း) အဓိပ္ပာယ်မှာ ကုန်းဂေဟစနစ်အတွက် ဇီဝမျိုးကွဲအပြောင်းအလဲများ၏ အဓိကမောင်းနှင်သူဟုဆိုလိုသည်။ မျိုးပွားရန် ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ကို မှီခိုရသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အလင်းအားအဆင့်အပေါ် အလွန် မူတည်နေသလို အလင်းညစ်ညမ်းခြင်းကြောင့် အလွန်ထိခိုက်လွယ်ကြသည်။  လေးနှစ်ကျော် တိုပွားလာမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် ပိုးစုန်းကြူးများအပေါ် တိုက်ရိုက်ကျရောက်သည့် တောက်ပသော အလင်းရောင်၏ ဆိုးကျိုးများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တိုင်းတာပြီး ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်က များစွာသောလေ့လာချက်များအရ လူလုပ်အလင်းရောင်များသည် ပိုးစုန်းကြူးများအပေါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သက်ရောက်နေသည်။  ပိုးစုန်းကြူးများသည် အင်းဆက်များကြားတွင် တစ်မူထူးခြားသည်။ သာမန်လူများပင် အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပြီး လူမြင်ကွင်း၌ အထင်ကရဖြစ်သည့် မျိုးစိတ်ဖြစ်ကာ ညဘက်ကျက်စားသော တောရိုင်းသတ္တဝါလောက၌ အလင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအား လေ့လာရာတွင် စံပြ စံနမူနာကာင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုအား လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် ယင်းတို့၏ အာရုံခံမှုစနစ်ကြောင့် ညဘက် အလင်းတု ဖန်တီးမှုအတွက် ပိုးစုန်းကြူးတို့သည် ကောင်းမွန်သော သက်ရှိဇီဝပြသသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ပိုးစုန်းကြူးများသည် ပိုးလောင်းအဆင့်တွင် ဆောင်းခိုတတ်ကြသည်။ အချို့မျိုးစိတ်များသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] အချို့သည် မြေအောက်တွင် တွင်းများတူး၍ ဆောင်းခိုကြပြီး သစ်ခေါက်အတွင်း သို့မဟုတ် အောက်ဘက်တွင် နေ၍လည်း ဆောင်းခိုတတ်ကြသည်။ နွေဦးကာလ ရောက်မှသာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ခရုများ၊ တီကောင်များ၊ အင်းဆက်များကို ရက်သတ္တပတ်များစွာ စားသုံးပြီးနောက် တစ်ပတ်မှ နှစ်ပတ်ခွဲ အဖို့ ပိုးတုန်းလုံးဖြစ်လာပြီး အရွယ်ရောက်ကောင်များ ဖြစ်လာကြသည်။ မျိုးစိတ် အများစု၏ သားလောင်းများသည် အခြား ပိုးလောက်လမ်း ကုန်းခရုနှင့် ပတ်ကျိများကို စားသည်။ အချို့သည် အစာခြေအရည်ကို သားကောင်ဆီသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသော မြောင်းပါသည့် အောက်မေးရိုး (ကိုက်ရန်၊ တုပ်ရန် ပါးစပ်ပိုင်း) ပါရှိသည်။ ဥရောပ မီးလင်းသည့် ပိုးတောင်မာ ကဲ့သို့သော Lampyris noctiluca တွင် ပါးစပ်မရှိပါ။ အခြား အရွယ်ရောက်ကောင်များ ဝတ်မှုန်နှင့် ဝတ်ရည် စားသုံးစဉ်တွင် အချို့သည် အမဲလိုက်စားသည်။
↑ Sala, Osvaldo E. (2000-03-10). "Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100" (in en). Science 287 (5459): 1770–1774. doi:10.1126/science.287.5459.1770. ISSN 0036-8075. PMID 10710299. Archived 11 June 2018 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိုးစုန်းကြူး&oldid=736618" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၇:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။